18 Amavesi EBhayibheli ngoMsindisi - DailyVerses.net
Amavesi EBhayibheli ngoMsindisi
1 kaJohane 4:10isibiuthandoukubuyisana
Kepha mina ngiyazi ukuthi uMhlengi wami ukhona;
ekupheleni uyakuma othulini.
1 kaJohane 2:2isibiintetheleloumhlaba
KwabaseFilipi 2:6-8ukulalela umthethoUJesuukubethelwa
KwabaseRoma 3:23-24isibiumusaukuvuma izono
KumaHeberu 7:25ukuphila okungunaphakadeinsindiso
Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala.
1 kaPetru 1:18-19UJesuukuphilaigazi
Nokho nginguJehova uNkulunkulu wakho
ngaphandle kwami awazi Nkulunkulu,
nomsindisi akakho ngaphandle kwami.
UHoseya 13:4izithombe ezibaziweyoUNkulunkulu
Esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo.
KumaHeberu 5:9insindisoukuphila okungunaphakadeongenasici
Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni weNdodana yothando lwakhe; okukuyo sinokuhlengwa, ukuthethelelwa kwezono.
IsibiInsindisoUJesuUkubethelwaUkubuyisanaIntetheleloIzihloko eziningi ...